बाबुराम नयाँ पुष्पलाल ? गृह पृष्ठ
बाबुराम नयाँ पुष्पलाल ? बिश्वदिप पाण्डे केही सातायता माओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईबारे सञ्चारमाध्यममा सकारात्मक/नकारात्मक विविध खालका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा बुलन्द पारेबापत कुनै बेला पार्टीभित्र कारबाहीमा परेका नेता भट्टराईको पक्षमा जनलहर पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक रूपमा बढ्दै गएको छ । इतिहासले आज भट्टराईको \_'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र\_'को अडान अन्ततः सही सावित गरिदिएको छ । उहाँले उठाएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नारा आज माओवादी पार्टीभित्र मात्र होइन, सारा नेपाली जनताको साझा नारा बनेको छ । विडम्बना, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न/गराउन जसले अग्रपंक्तिमा रहेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, उसैलाई आज पार्टीभित्र र बाहिरका अवसरवादी र प्रतिगामी तत्त्वहरूले पर्दाभित्र बसेर गणतन्त्रविरोधी भनेर सावित गर्न गोयबल्स शैलीमा असफल अराजनीतिक कुचेष्टा गरिरहेका छन् । यसलाई भट्टराईले कति गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ भन्ने आम जनचासोको विषय बनेको छ । उहाँले प्रतिवाद गर्नुको सट्टा मौन किन बस्नुभएको होला, उहाँका शुभचिन्तकहरूको गुनासो छ । कसैले राजा ज्ञानेन्द्र र कट्टर दरबारियाहरूले \_'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र\_'को वकालत गरे भनेर हल्ला गर्छ र त्यसलाई कसैले पत्याउँछ भने त्योभन्दा ठूलो राजनीतिक विडम्बना के हुनसक्छ ? त्यस्तै कट्टर गणतन्त्रवादी नेता जसले सधैं लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनानिम्ति कडा संर्घष् गर्नुपर्‍यो, उसैले \_'सांस्कृतिक राजा\_'को वकालत गर्‍यो भनेर हौवा पिट्दै कोही हिंड्छ भने प्रस्ट छ, भट्टर्राईले होइन, हौवा पिट्नेहरू \_'सांस्कृतिक राजा\_' चाहन्छन् । उहा“को क्रान्तिकारी छविमा आ“च पुर्‍याएर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने अवसरवादी प्रवृत्तिको राम्रोसँग संकेत गर्छ, यसखालका प्रवृत्तिले । अनि सत्य-तथ्य नबुझी ती हौवाको पछि लाग्नेहरूलाई के इतिहासले माफ गर्ला ? कतै भट्टर्राईलाई \_'नयाँ पुष्पलाल\_' त बनाउन खोजिएको छैन, बेलैमा क्रान्तिकारी जनता र कार्यकर्ता सजग रहनु आवश्यक छ । त्यस्तै कतिपयले जानेर या नजानेर पार्टीभित्र दोस्रो हुने दौडमा बाबुराम भनेर \_'कु-प्रचार\_' गर्न खोज्दैछन् । उहाँको व्यक्तित्व, स्तर, क्षमता, बौद्धिकता, त्याग कसैसामु छिपेको छैन । उहा“को जीवन खुला किताबसरह छ । अनि किन हामी भट्टर्राईको त्यागलाई गिज्याउने कोसिस गर्दैछौं ? किन हामी हाम्रो दर्रि्रपनलाई उदांगो पार्नतिर उद्यत छौं ? नेपाली क्रान्ति र जनयुद्धमा सबै नेता/कार्यकर्ताले उत्तिकै त्याग, बलिदान गरेका छौं, बौद्धिकतामा पनि उत्तिकै विकास गरेका छौं । क्रान्तिलाई यो उचाइमा पुर्‍याउन हामी सबैको बराबरी मिहेनत होला । तर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता भट्टर्राईको एउटा कुशल नेतृत्वमा हुनुपर्ने क्षमता, व्यक्तित्व, बौद्धिकता र त्याग हामी छुन सक्दैनौं । त्यस्तै उहाँलाई \_'भारतपरस्त\_' भनेर अर्को आरोप लगाउने गरिएको छ । यो आफैंमा पाखण्ड र आफूमा रहेको अक्षमता र हीनताबोधको अभिव्यक्ति हो । कोही भारत बसेर पढ्यो भन्दैमा उसलाई भारतपरस्त भन्न मिल्छ ? कहाँको राजनीतिक नैतिकता हो यो ? यो आरोप राजनीतिक पर्ूवाग्रह सिवाय अरू केही हुनै सक्दैन । उहाँको बौद्धिकता र क्षमतासग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूले डाह, जलन र इष्र्याका कारणले पनि यो आरोप लगाउने गरेका छन् । यो आरोप प्रमाणसहित पुष्टि गर्न हामी चुनौती दिन चाहन्छौं । उहाको राजनीतिक छवि र उनको बढ्दो लोकप्रियताबाट अत्तालिएका \_'बेइमान क्रान्तिकारी\_'हरूद्वारा अरूलाई झूटो आरोप लगाएर आफूलाई बढी क्रान्तिकारी देखाउन जनतालाई छरिएको भ्रमसिवाय यो अरू केही हुनै सक्दैन । राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा वैचारिक र व्यावहारिक रूपले स्पष्ट दृष्टि भएको व्यक्ति उहा हुनुहुन्छ । मोहनविक्रमले \_'गद्दार पुष्पलाल\_' भन्ने पुस्तक लेख्ने सर्न्दर्भमा पनि पुष्पलाललाई \_'भारतपरस्त\_' र \_'कांग्रेसपरस्त\_' भनेर आरोप लगाएका थिए । उनको त्यो आरोप र विरोध इतिहासले गलत थियो भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसकारण राजनीतिक रूपले वैचारिक प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नेहरूले यो वा ऊ परस्त, दलाल र गद्दार भनेर आफूलाई सही सावित गर्न प्रयत्न गरे पनि इतिहासले स्वयम् उनीहरूलाई गलत सावित गरिदिएको इतिहास प्रस्टै छ । त्यस्तै \_'नया मोहनविक्रम\_'हरू नेता भट्टर्राईलाई \_'नया गद्दार पुष्पलाल\_' बनाउने व्यापक तयारीमा छन् । त्यसकारण कुनै व्यक्तिलाई कतिपय सर्न्दर्भमा कसले के भन्छ/भन्दैन भन्ने प्रश्न प्रधान होइन, उसले के गर्छ/गर्दैन भन्ने प्रश्नका आधारमा उसको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । भट्टर्राईले अहिलेसम्म गरेका कामहरूको आधारमा भारतपरस्त भनेर पुष्टि गर्नसक्ने प्रमाण कसैसित छैन र कसैले पुष्टि पनि गर्न सक्दैन किनकि झूटोको प्रमाण हुनै सक्दैन । निरंकुश तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्र अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेससंग कार्यगत एकता गर्नुपर्छ भनेकै कारणले मोहनविक्रमले पुष्पलाललाई \_'गद्दार\_' भनेका थिए । अहिलेसम्म पुष्पलालको विचारले समग्र राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कुरा ०४६ सालको आन्दोलन र १२ बुदे समझदारीदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि भएको छ । पछिल्लो चरणमा नेपालमा सामन्तवाद र राजतन्त्रको अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्यनीतिको अग्रणी नेता डा बाबुराम भट्टर्राई नै भएको स्पष्ट छ । १२ बुदे समझदारी र अहिलेसम्मको कार्यनीतिको सफल प्रयोग गर्ने एकजना प्रमुख व्यक्तित्वको रूपमा पनि उहाको नाम आउछ । राजतन्त्र अन्त्य गर्न र गणतन्त्र ल्याउन विभिन्न राजनीतिक पार्टर्ीीथै विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूबीच कुशलतापूर्वक वैचारिक सहमति कायम गर्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी उहाले निर्वाह गरेको जगजाहेरै छ । त्यसैकारणले उहाको वैचारिक र कूटनीतिक कुशलतासामु पराजित मानसिकताबाट ग्रसित व्यक्तिहरूले उहालाई यो वा ऊ भनेर चरित्रहत्या गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । त्यसैले सबै सच्चा क्रान्तिकारीहरूले यस्ता \_'नक्कली क्रान्तिकारी\_'हरूको षडयन्त्रलाई बेनकाव गर्न सकिएन भने उहाको मात्र होइन, सिङ्गो माओवादी आन्दोलन र जनयुद्धकै अपमान हुनेछ ।
भट्टर्राईजस्ता नेता क्रान्तिकारी आन्दोलनमा पाउनु ठूलो कुरा हो । उहाँको सम्मान र उहाका विचार संरक्षण गर्नुको सट्टा पर्दाभित्र बसेर उहाँको बदनाम गर्नुले के क्रान्ति सम्पन्न गर्न सकिएला त ? यस्तो बाँदरे प्रवृत्ति किन ? एकपटक सम्बन्धित सबैले व्यक्तिगत स्वार्थ र पदलोलुपतामा नपरी सिङ्गो क्रान्ति र जनताको बलिदान सम्झिएर गम्भीर भएर सोच्ने हो भने सत्यतथ्यको बोध हुनेछ । लेखक, नेकपा (माओवादी) सँग सम्बद्ध छन् ।